Misty mbanje mbeu | MyWeedSeeds.com
Paka rimwe rine mbeu gumi
Kureba: kusvika 27.5in | 70cm
Misty mbanje ndeye yakasarudzika mbanje dzakasiyana, inoenderana neWhite Chirikadzi uye Snow White mbanje. Iwe unomuona iye White Chirikadzi pesvedzero mune dense buds ayo akapfuma kwazvo muTC makristasi uye resin zvekuti anoita kunge ane chando. Mashizha ake makobvu akasvibira uye akasvibira kunge gadheni remubindu. Misty chirimwa chiri nyore kurima, chinogadzirika chinokura zvakanaka kunze kana mumba, uye chinopfuura pasi pegungwa regirini (SOG) system. Anokwanisa kuchinjika kumatunhu anotonhorera uye nzvimbo dzine nguva pfupi yemasikati. Iye anokura akareba kana mupfupi sezvaunomuchengeta uye achiburitsa goho rinoshamisa kune chero hurefu hwaunosarudza. Misty mbanje inoburitsa yakasimba musky kunhuwirira uye isina mwero hutsi hunoshamisa zvinoshamisa simba - rakakura rekugovana. Ane inofadza, yemakwenzi flavour inoteverwa nekitsi yekupedzisira. Iwe uchanakidzwa naye kwazvo cerebral high.